रोचक सामग्री Archives - Page 8 of 12 - Daily State News
क्यानडाको अल्बर्टाकी मेरी ग्राम्सको हिराको औँठी १३ वर्ष पहिले घरकै बगैँचामा हराएको थियो । त्यो सन् २००४ को कुरा थियो । अहिले मेरी ८४ वर्षकी छिन् । हराएको यति लामो समय हुुँदा समेत फेला नपरेपछि औँठी भेटिने आश उनले मारिसकेकी थिइन् । तर हालै उनले उक्त औँठी आफ्नै बगैँचामा फेला पारिन्, एउटा गाजरको साथमा । […]
स्वयंसेवी तथा केही भान्छेहरु मिलेर एउटा यस्तो अमलेेट तयार पारे जसको स्वाद त केवल एउटा सहरले मात्रै चाख्न पायो तर चर्चा चाहीँ विश्वभर नै भयो । उक्त अमलेट १० हजार गोटा अण्डाबाट बनाइएको हो । बेल्जियमको मालमेडी सहरमा काठबाट बनाइएको भाँडोमा यो भिमकाय अण्डा तयार पारिएको हो । अमलेट स्वादिष्ट बनाउनका लागि यसमा हरियो प्याज […]
स्वयंबरको औंठीको मूल्य कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा चीनका एक व्यक्तिले पुष्टि गरिदिएका छन् । आफ्नो हराएको इन्गेजमेन्टको औंठी भेटिएको खुसीयालीमा दक्षिण–पश्चिमी चीनको चोंगक्विंगका एक व्यक्तिले ५ हजार प्लेट चाउमिनको भोज गरेका हुन् । वांग थर भएका ती व्यक्तिले आफ्नो प्रेमको वर्षगाँठको अवसरमा प्रेमिकालाई सरप्राइज दिन चाहन्थे । अगष्ट १३ को त्यस दिन उनीहरुको इन्गेजमेन्ट […]
एकाएक किन भाइरल बन्दै यी युबतिको तस्वीर (फाेटाे फिचर सहित)
भारतको हैदराबादकी सपना व्यास पटेल नाम गरेकी एक युबतिको सुन्दर तस्वीरहरु हिजो आज सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेका छन। उनले सामाजिक सञ्जाल इन्टाग्राममा आफ्ना तस्बिर पोष्ट गर्दै निकै फ्यान बटुलीरहेकी छन्। इन्स्टाग्राममा मात्रै हैन ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुमाझ पनि यी युवतीको चर्चा सुरु भएको छ। पेसाले शारिरीक व्यायम सिकाउने यिनी उनी मोडलिङ पनि गर्छिन्। उनको फिटनेश र […]
एजेन्सी । पाकिस्तानको एक गाउमा मानवीयता भुलेर त्यहाका ठालुहरुले किशोरीलाई बलात्कार गर्ने आदेश गरेका छन । पाकिस्तानको मुल्तानमा एक किशोरीमाथि बलात्कारको आदेश दिएको आरोपमा २० जनालाई पक्राउ गरिएको छ । युवतीको दाईले एउटी बालिकामाथि बलात्कार गरेका थिए । त्यसैको बदला स्वरुप पञ्चायतले बहिनीलाई बलात्कार गर्ने आदेश दिएको हो । प्रहरीका अनुसार दुवै पीडितका परिवार नातेदार हुन् […]
यो हो विश्वकै सानो सुनको झण्डा
विश्वकै सबैभन्दा सानो आकारको दाबी गरिएको सुनको झण्डाको आकार यति सानो छ की यसलाई तपाइँ सियोको प्वालबाट समेत निकाल्न सक्नुहुन्छ । भारतको राजस्थानस्थित उदयपुरका एक व्यक्तिले सबैभन्दा सानो आकारको भारतीय झण्डा निमाएण गरेका छन् । सुक्ष्म कालिकढ इकबाल सक्काले भारतको ७० औँ स्वतन्त्रता दिवसको वर्षगाँठका अवसर पारेर उक्त सुनको झण्डा तयार पारेका छन् ।विश्वकै सबैभन्दा सानो […]
कुनै मानिस ६० वर्षसम्म अन्न नखाइकन बाँच्न सक्ला ? यसको कल्पना पनि गर्न गाह्रो हुन्छ । तर छिमेकी मुलुक भारतमा चार्ही एक महिला ६० वर्षसम्म अन्नको दाना समेत नखाई बसेकी छन् । भारतको मध्यप्रदेशस्थित धार जिल्लाको धामनोद गाउँकी ७५ वर्षीया सरस्वती बाइले पछिल्लो ६० वर्षयता अन्न खाएकी छैनन् । उनी चिया र पानीको सहारामा बाँचेकी छिन् […]
शास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ की महिलाका बिभिन्न गुण हुन्छन् । गुणवान कन्यासँग संगत गर्ने पुरुष असाध्यै भाग्यमानी हुन्छ । यस्ता कन्या विवाहपछि घर भित्रिँदा हरेक पुरुषको भाग्य खुल्छ र घरमा लक्ष्मीको बास हुने यो शास्त्रमा लेखिएको छ । १. कान तथा ओठमा कोठी छ भने त्यस्ता कन्या भाग्यामानी र सुशिल हुन्छन् । २. पैतालाको बूढी […]
इजिङ – महिलाको ब्राको आकारअनुसार छुट दिने घोषणा गरेपछि चीनको एउटा रेस्टुरेन्ट विवादमा तानिएको छ । झेङझियाङ प्रान्तको हाङझोउको ट्रेन्डि स्रिम्प रेस्टुरेन्टले छुट दिने घोषणा सहितको विज्ञापन सार्वजनिक गरेपछि विवादमा तानिएको हो ।ब्रा र पेन्टीमा सजिएर लामबद्ध उभिएका महिलाको कार्टुनसहितको सवज्ञापन कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञापनमा ‘सम्पूर्ण सहरले स्तन खोजिरहेको’ नारा लेखिएको छ । रेस्टुरेन्टले […]
एउटा नाथे च्याउको तौल कति होला र ? तर चीनमा भने पूरै ८ किलो तौलको च्याउ फेला परेको छ । चीनको युनान प्रान्तमा उक्त भिमकाय च्याउ भेटिएको हो । यो च्याउको वजन ८ किलो छ भने यसको छाताको परिधि १.८ मिटर रहेको छ । च्याउको छाताका धेरै पत्रहरुले बनेको छ । पुअर सन रिभर नेसनल […]